Somaliland: COVID-19, Oo Kordhay Magaalooyinka Hargeysa Iyo Burco - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Hargeysa(ANN)- Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Somaliland, Dr Maxamed Cabdi Xergeeye, ayaa sheegay in 23 qof oo ay maanta shaaciyeen laga helay xannuunka, kadib markii 110 qof oo lasoo xidhiidhay Cusbitaalka si looga baadho xannuunka laga helay, taas oo tirada guud ee dadka xannuunka laga helay oo muujinay in xannuunku kor u kacay, isla markaana ay kordhayso tirada dadka laga helayaa.
Dadka laga helay cuddurka oo ahaa kuwo iska shakiyay markii ay isku arkeen calaamadaha, isla markaana lasoo xidhiidhay, waxay isugu jiraan 23 haween ah iyo 6 Haween ah, taas oo tirada guud ka dhigaysa 286 qof.
Sida uu sheegay Dr, Xergeeye oo maanta Warbixinta maalinlaha ah siinayay Warbaahinta, oo ka hadlayay Baadhitaanada Wasaaradda Caafimaadka Somaliland ee xannuunka COVID-19, wuxuu muujiyay in cuddurku si hoose ugu faafayo Magaalada Hargeysa iyo sidoo kale magaalada Burco, marka loo eego magaalooyinka kale ee dalka, walaw aannu jirin baadhitaan ka baxsan dadka iskood u imanaya Cusbitaalka.
Dr. Xergeeye, waxa uu sheegay in dadka kasoo kabtay ee ka bogsaday ayk kusoo kordheen 5 qof, taas oo tirada dadka kasoo kabtay ee ka bogsaday ka dhigaysa 33 qof, halka Qof dumar ah ay magaalada Hargeysa ugu geeriyootay Xanuunka Covid-19, taas oo tirada Dadka Xanuunku u dhintay ee Somaliland ka dhigaysa 19 Qof.
Dr. Xergeyee, ayaa sidoo kale sheegay in tirada Guud ee dadka goobaha Caafimaadka u tagay baadhitaanka Xannuunka gaadhayaan 1192 qof , kuwaas oo 286 ka mid ahi laga helay, taas oo cel-celis ahaan noqonaysa in Boqolkiiba 24% dadka la baadhay laga helay xannuunka.,